तेमालमा वितरण भईरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चिन्ता की विरोध ? – मिलिजुली खबर
तेमालमा वितरण भईरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चिन्ता की विरोध ?
धुलिखेल ३०, बैशाख: काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले बैशाख २३ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरू गरेको छ । उसले जेठ २ गतेसम्म भत्ता वितरण गरिसक्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
तर गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरू गरेकै दिनदेखि तेमालका धेरै जसो सासमाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले कोरोना भाईरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिए रहेको र यस्तो अबस्थामा बृद्ध बृद्धा थप जोखिममा पर्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।
पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबैलाई कार्ड सहित पोखरीनारायस्थानमा रहेको बैंकमा उपस्थित हुन् उर्दी जारी गर्यो । उसो त चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सूचना जारी हुने वित्तिकै पनि धेरैले कि त घर घरमै गएर वितरण गर्नु, नभए तत्काललाई रोक्नु भन्ने सुझाव पनि दिएका थिए । तर पालिकाले त्यो सुझाव मानेन्, किन ? ‘यो रकम हामीले वितरण गरेका होईनौ, हामीले सिटिजन बैंकमा रकम जम्मा गरेका मात्रै हौ, बैंकले वितरण गरेको कुरामा पालिकालाई दोष्याउन आवश्यक छैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण कुइकेलले भन्नुभयो ।
पालिकाले सिटिजन बैंकको बनेपा र गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको शाखाबाट पैसा निकाल्न मिल्ने गरी ब्यवस्थापन गरेको दाबी गरेको छ । तर बनेपा, धुलिखेल बस्दै आएका तेमालका नागरिक समेत भत्ता लिन पालिकामै पुगेको बताईन्छ । ‘दुईदिन चाहिँ अलिक भिड् नै थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुईकेलले भन्नुभयो, भिड हुन्छ भनेरै अरू बेला भन्दा फरक ढंगले वडागत रूपमा वितरणको तालिका बनाईदिएका छौँ ।’
समाजमा दुईखाले तर्क सधै हुने गर्दछ । नदिँदा पनि किन नदिएको भन्ने र दिँदा पनि किन दिएको भन्ने । यहि तर्कमा तेमालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूबीच बहस चलेको छ । तर गाडी नचलिरहेको अवस्थामा बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले दुःख भने पक्कै पाएँ । कि निषेधाज्ञा अघि नै वा कि त केहि समय कुरेर दिएको भए अहिले यो खालको टीकाटिप्पणी हुने थिएन ।
तेमाल गाउँपालिकामा यो पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २९ सय ६९ रहेको छ । जसमा जेष्ठ नागरिक १८ सय ७६ जना, दलिल जेष्ठ नागरिक ५८, जेष्ठ नागरिक एकल महिला ३२८ जना रहेका छन् । त्यसैगरि विधवा महिला ३६२, पूर्ण अपाङ्ग ५९, ख बर्गका अपाङ्ग १७७ जना र ५ बर्ष मुनिका दलित बालबालिका १०९ जना रहेका छन् । यी सबैको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत नै वितरण हुँदै आएको छ ।
एमाले विवाद उत्कर्षमा, ओली र माधवबीच वार्ता शुरू
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको अपिल 'हामी तपाईकै साथमा छौ, केहीदिन घरमै बसेर सहयोग गरिदिनुस्'